In ka badan 22 sano oo waayo -aragnimo ah
Qiimayaasha, anshaxa, iyo dabeecadda
6 -da sababood ee ugu saraysa ee aad noo dooran karto
Polyester Qoryaha Qorraxda
Maro adag Muraayadda Qorraxda
Muraayadda qorraxda ee Zebra Fabric
Dharka Indhoolayaasha ee toosan
Malabka Malabka Indhaha Indhoolayaasha
Tareenka Hoose ee Indhoolayaasha rullaluistemadka
Mechanism -ka Roller Blinds
Tareenka Hoose ee Zebra/Shangri-La Indhaha
Daboolka loogu talagalay Indhoolayaasha rullaluistemadka
U leexo Rod
PVC Tape Double
Jooji Giraanta/Qufulka dhaqe
Sidaha Indhoolayaasha Tooska ah
Slat Hanger/Hook Trapezium
Isku -xirka Xaashida Indhoolayaasha Tooska ah
Cord Drive Runner ee Indhaha Indhaha
U janjeerta Usha Taageerida Indhoolayaasha Tooska ah
Qurxinta Guriga Verman Indhaha Indhaha Indhaha Indhaha
New Design Jumlada Jaranjarada Shangri-La Blinds F ...
Qurxinta Guriga Shangri-La Blind Fabric Semi-B ...
Triple Shade Shangri-La Roller Indho Indho Fabric for Res ...
Qurxinta Guriga Labada Rainbow Oo Indhaha Indho Indhaynaya
Qarsoonaanta Qarsoon ee Shiinaha Zebra Blind Fabric Waayo Office Wi ...
Midabyo badan oo Lakab Labaad ah ayaa Indho Indho Indho 100% Polyester
Roob-Rawrka Rainbow wuxuu Indho Indheeyaa Habeen-Habeen-Zebra Daahyada Daaha ...
Daabacaadda Zebra Day iyo Habeenkii Rainbow Duo Bl ...
Rullaluistemadka Shiinaha oo Indhaha Indho Beeshay Maalin & Habeenkii Qeybta Com ...
Xafiiska Shiinaha Side Side Custom Sunscreen Zebra Auto ...
Mashiinka Shiinaha Dhulka Faux Linen Zebra Dual Day iyo ...
Daaqadaha Shiinaha Qorraxda Qorraxda Polyester Sunscreen Rolling ...
Yaa bixin doona qarashka meesha loo socdo marka dhoofinta dharka?
Runtii waa wax xiiso leh inaan si wanaagsan ula xiriirno macaamiisheena inta lagu guda jiro xirfadaha caalamiga ah, laakiin markii xamuulku yimid oo sugayay in la sii daayo, dhibaatooyin cusub ayaa soo ifbaxay ....
Ma haysataa MOQ? Waa maxay MOQ -gaaga?
Inta lagu gudajiro ganacsiga dharka, dhagaystayaasha ayaa had iyo jeer weydiiya su'aashan: waa maxay MOQ -kaaga? Caadi ahaan ma haysanno MOQ dharkayaga, taasi waa in la yiraahdo, MOQ -gaagu waa hal duub oo buuxa oo loogu talagalay nooca ugu badan ee dharka ...
Maxaa Ku Cusub Fabric Zebra
Groupeve waxay had iyo jeer u heellan tahay inay noqoto mid ka mid ah warshadaha ugu wanaagsan ee indha -indheeya zebra. Dhawaan, Groupeve waxay soo saartay dhar cusub oo zebra ah. Dharka zebra ee aan samaynay waxaan ...
Faahfaahinta saamiyada dharka ee Groupeve
Ma haysaa kayd? Macaamiisha mar walba waydii su'aashan. Haa waxaan haynaa kaydka qaar ka mid ah dharka caadiga ah laakiin waxaan u baahanahay inaan hubinno ka dib marka la xaqiijiyo amarka oo kaydka hayn karo kaliya 3 maalmood. intaan macmiilku bixin, ...
Groupeve Ururinta Dharka Acrylic -ka Cusub ee Cusub
Dharka looxa loo yaqaan 'acrylic fabric' ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo badeecadaha dibadda. Waxqabadka marada akril waa mid aad u wanaagsan, waxayna kaalin weyn ka qaadataa nolosheena. Dharka looxa ayaa leh faa'iidooyinka aan biyuhu lahayn, stai ...
Waa maxay doorashada ugu fiican ee loogu talagalay dharka madow ee qorraxda
Muraayadaha rullaluuska ayaa shaqo weyn ka qabtay xannibaadda iftiinka qorraxda, waxayna xitaa ku dareen xoogaa kuleyl ah. Sababtoo ah indho -indhayntani waa dhar, soo -saareyaal badan ayaa iyaga ku dara. Haddii kuwan ...
Indhoolayaasha ugu fiican si ay kaaga ilaaliyaan kulaylka xagaaga
Hadda waxaan ku jirnaa rafaadka xagaaga. Tani waxay ka dhigan tahay marka lagu daro maalmo dheer oo caajis ah barkadda dhexdeeda, waxay sidoo kale keeni doontaa xoogaa qoyaan iyo heerkulka dubista ...
Rullaluudda Warshadda Shiinaha ayaa indho -indhaysa dharka xagaaga
Xagaagu waa imanayaa oo macaamiil badan ayaa qorshaynaya inay rakibaan indhoolayaal si ay u diidaan kulaylka. Indhoolayaasha ugu fiican ayaa xakamayn kara iftiinka, kordhin kara asturnaanta, hagaajin kara hurdadaada, iyo yareyn kara tamarta ...
Yaa bixin doona farqiga xamuulka ee ganacsiga caalamiga ah?
Maadaama qof walba ogyahay xamuulka badda ee kor loo qaaday tan iyo COVID-19 kaliya maahan dhoofinta dharka laakiin inta badan badeecadaha adduunka oo dhan, runtii waxaan seegnay inaan adeegsan karno 1500usd si aan u dirno weel 20ft ah 320 ...
Waa maxay sababta qaar ka mid ah cabbirrada dharka caadiga ah ay uga duwan yihiin waxa macmiilku helay
Taariikhdeena xirfadaha caalamiga ah, waxaan la kulmi doonnaa dad badan oo aan na fahmin, maanta waxaan la wadaagi doonnaa sababta aan macmiilka u siinayno dhererka dharka iyo ballaadhkiisa caadiga ah, laakiin waxay noqdaan d kale ...
Dharka Qorraxda Qorraxda ee ugu Fiican Miisaaniyad Adag
Haddii aad raadinayso 5% dhar -qorrax -furan oo furfuran oo loogu talagalay indho -shareerka ziptrack, waxaan ku talinaynaa dharkayaga qorraxda ee MagicalTex. 2m/2.5m/3m ballac ayaa la heli karaa. Midabada 10 ee xulashada. Iyo samp ...
100% polyester casriyeynta qaabka maro zebra cusub
Waxaan kuugu cusbooneysiin karnaa 100%polyester -kaaga cusub ee zebra sida hoos ku qoran waa dhammaan qaabab cusub oo ka duwan noocyada caadiga ah ee caadiga ah, qiimuhuna wuxuu noqon doonaa mid tartan badan ...
Cinwaanka: Maya.1098 Qaybta Dhexe ee Jiannan Avenue, High-Tech. Aagga, Chengdu, Shiinaha.